Col. Caarre oo Hishiis nabad ah laqaatay gudigii dhexdhexaadinta Asiga iyo Mamulka Somaliland -
HomeWararkaCol. Caarre oo Hishiis nabad ah laqaatay gudigii dhexdhexaadinta Asiga iyo Mamulka Somaliland
Col. Caarre oo Hishiis nabad ah laqaatay gudigii dhexdhexaadinta Asiga iyo Mamulka Somaliland
Waxgarad u kala dab qaadayay Xukumada Somaliland iyo Jabhada hubaysan ee uu hogaamiye Col Caare ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen wada hadala labada dhinac ee ku aadan in la soo afjayo dagaalka ka dhexeeya.
Cadde-Gude ayaa sheegay in Col Caare uu heshiiska qaatay balse ay sugayaan Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo haataan dalka Sucuudiga ugu maqan gudashada Acmaasha Xajka oo uu sanadkaan ka qayb galayay.
Suldaanka ayaa sheegay in qofka Masuuliyadu ka saarantahey heshiiska uu yahay Muuse Biixi isla markaana ay ka doorayaan in uu la yimaadu tanaasul ku aadan sidii dagaalkaan loo jooji lahaa, loona soo afjari lahaa Colaada gacan ka hadalka isku badashay ee ka dhaxaysa Xukumadda Somaliland iyo Col Caare.
Suldaan Axmed Cismaan (Cadda-gude) ayaa sheegay in ay qaateen doorkoodii ku aadanaa dib u heshiinta, waxa uuna ku baaqay la joojiyo Colaadda Gobolka Sool si dadka deegaanku helaan nolol ka duwan mida ay maanta ku suganyihiin.
Jabhada la magac baxday Dulmi diid ee uu hogaamiye Col Caare oo horay ugu tirsanaa Ciidan Maamulka Somaliland ayaa iskaga baxay Ciidanka Maamulkaasi waxaana uu lagay dagaal uu sheegay in uu uga xoraynayo Gobolka Sool.